ORANGE: Mandray anjara feno amin’ny fanampiana ny mpiara-belona | déliremadagascar
ORANGE: Mandray anjara feno amin’ny fanampiana ny mpiara-belona
Socio-eco	 4 juillet 2019 R Nirina
Zava-dehibe ho an’ny orinasa ny fampiharana ny RSE na « Responsabilité sociale des entreprises ». Fomba iray hanehoana fa tsy mijanona amin’ny fampiroboroboana ny orinasa fotsiny ihany ny RSE. Izany indrindra no namoronana ny salon de la Responsabilité sociale des entreprises et des initiatives pour le Développement Durable (RSE-IDD) ho fandresena lahatra ny orinasa eto Madagasikara mba Fandresena lahatra ireo orinasa handray anjara amin’ny fanampiana ny maha olona sy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Nanomboka omaly 3 jolay ary hifarana androany 4 jolay 2019 eny amin’ny « The Station » Soarano, Café de La Gare teo aloha ny Salon RSE-IDD, andiany fahaefatra.
Mpanohana ity hetsika ity ny orinasam-pifandraisan-davitra, Orange Madagasikara. Lohalaharana amin’ny orinasa ny fandraisana andraikitra amin’ny lafiny ara-tsosialy mba ho fanantanterahana ny politikan’ny fampandrosoana maharitra. Mampahafantatra ny fandaharan’asany amin’ny lafiny sosialy eny amin’ny salon ny Orange ka anisan’izany ny fampivoarana ny fanabeazana nomerika amin’ny alalan’ny Orange School, ny fanajana ny maha olona eny amin’ny tontolon’ny asa, ny fanampiana ny tanora mpandraharaha ary ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.
One comment on “ORANGE: Mandray anjara feno amin’ny fanampiana ny mpiara-belona”
Pingback: ORANGE: Mandray anjara feno amin’ny fanampiana ny mpiara-belona - ewa.mg